नेकपाको असफल शासनले क्षतविक्षत बन्दैछ देश – Chitwan Post
देश चलिरहेकै छ । ठूलो बहुमत प्राप्त सरकार छ । विपक्षी दल पनि छन् । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र पनि छ । प्रेस जगत् पनि छ, तर के देश सहीरुपमा चलिरहेको छ त ? जे गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने थियो, त्यस्तै भइरहेको छ कि लुटतन्त्र र छाडातन्त्र मौलाउँदै छ ? के हाम्रा सन्ततिको भविष्य सोचेर काम भइरहेको छ ? यावत् प्रश्नहरु दिनदिनै थपिँदै छन् । समाजवादको उत्कृष्ट नमुना भएका देशहरु मात्र होइन उत्तर कोरिया, क्युबा र भेनेजुयलामा पनि सरकार त चलिरहकै छन् । नेपालमा गणतान्त्रिक मोडलको लोकतन्त्र स्थापना त भयो, तर त्यसका अंगले भने ठीक काम गरिरहेका छैनन् । दलका नेता र कार्यकर्ताको आचरण जेजस्तो हुनुपथ्र्यो ठीकविपरीत छ । सरकारको कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र न्यायालय हुन्छन् भने सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुख हामीसँग यी सबैथोक छन् त ? अहिलेका प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति र सरकारको काम सकारात्मकरुपमा चर्चा लायक छैनन् । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको गोटी बन्नु परेको छ । आफ्नै पार्टी र नेतृत्वका कारण प्रतिपक्ष दलले नैतिक धरातल गुमाइरहेको छ ।
देश भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । सरकारी सम्पत्तिको चरम दोहन छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ । शेयर बजार र निजी क्षेत्र आतङ्कित छन् । कृषक, विद्यार्थी सबै पीडित छन् । महिला हिंसा बढेको बढ्यै छ, तर प्रमुख प्रतिपक्ष जल्दाबल्दा मुद्दा उठाउन चुप छ । कांग्रेसको नेतृत्व राजनीतिक मात्र नभएर नैतिक संकटमा पनि छ । धेरै बोले बाछिटा आफैँतिर फर्केला भन्ने डर छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण वा निगरानी भन्ने कुरा सत्तारुढ दलकै विवेकमा निर्भर गर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै तहमा सत्तारुढ दलको अत्यधिक बहुमतका कारण प्रणालीगतरुपमा अन्तरदलीय नियन्त्रण र सन्तुलनको हाम्रोजस्तो अवस्थामा यति ठूलो संख्याको बहुमत जोगाउनु नेकपाका लागि चुनौतीको विषय हो । नेतृत्वले विवेक कायम गर्न सकेन भने विधि–विधान र प्रक्रियाले मात्र जोगाउन सकिन्न भन्ने हाम्रो विगतले पुष्टि गर्छ । नेकपा नेतृत्वमा पनि विवेकको ठूलो खडेरी देखिन्छ । ं
सरकारका नीति र काम, सबै तहको नेतृत्वमा देखिने मोजमस्ती, रहनसहन, स्वाद र व्यवहार कुनै पनि कुराले यो सरकार र नेकपा समाजवादको बाटोमा छ भन्न मिल्दैन । मुख्य कुरा के हो भने तमाम गरिबी निवारणका महँगा योजनाबाट पैसा सुकिलामुकिला, कुलीनले कुम्ल्याउने र अरु टुलुटुलु हेरिरहने ! नेकपा खराब शासनतर्फ लम्किरहेको छ । अहिले नेकपामा जेजस्तो आन्तरिक राजनीति र द्वन्द्वको विकास हुँदैछ त्यो केवल एउटा दलको भविष्यसँग मात्रै सीमित छैन । नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले यथार्थ धरातलमा टेकेर आफ्नो नीति र व्यवहारलाई सम्हाल्न सकेन भने हाम्रो लोकतन्त्र पुनः संकटको भुमरीमा फस्ने जोखिम देखिन्छ ।
नेपालले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हासिल ग¥यो । संघीय ढाँचामा संविधान बन्यो । सबै तहमा जनताका प्रतिनिधिको शासन छ । सरकारको स्थिरता छ । सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेरमात्रै पुग्दैन, त्यसलाई जनताले कसरी लिइरहेका छन् भन्ने कुराको पनि अर्थ हुन्छ । सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनतामाझ विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारद्वारा यती समूह र सम्बन्धित संस्थालाई नेपाल ट्रष्ट र अन्य सम्पत्ति सुम्पिइएको छ । जलविद्युत्मा दलालको हालीमुहाली गराउँदै बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा एक चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पियो । राष्ट्रवादको चकलेट बेचेर सत्तामा पुगेको दलले कालापानी, सुस्ता र लिम्पियाधुराको विषयमा नियत देखाउँदै छ । विराटनगरको रूग्ण जुट मिलमा हजारौँ नक्कली कर्मचारी भर्ती गर्दै करोडौँ झ्वाम पारियो ।
वाइडबडी घोटाला छानबिन गर्ने भन्दै नाममात्रैको छानबिन समिति बनाइयो । ठेकेदारलाई पोस्ने खाले भएन भनेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको भयै छ । संघीयता निर्माण भए पनि कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सदनमा सत्तापक्ष र विपक्षको सहकार्यमा यस्ता कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । कानुन भनेको कुनै एक दलका सर्मथकका लागि होइन, यो त सर्वसाधारणका लागि र मुलुकमा अमनचैन सिर्जना गर्नका लागि हो । सरकार गुट या दलगत स्वार्थ खातिर आसेपासेलाई पोस्ने विधि, नियम र सामान्य नैतिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने गम्भीर बाटोमा हिँडेको देखिन्छ । सरकार चलाउनेले नागरिकका हितलाई केन्द्रमा राखेका छन् भन्ने कुरामा शंका छ । विश्वासको शासन र संरचना दलविशेषका नेताप्रतिको बफादारीमा अड्किएपछि हिजोको एउटा नारायणहिटीको सट्टामा आज दर्जनौँ टाकुरे दरबार स्थापित हुन पुगेका छन् । आमनागरिकले स्वतन्त्ररुपमा यथार्थ बुझ्ने प्रयत्न गरेनन् भने धोका हुनेछ ।
विगत १५ वर्षयताको नेपालको शासकीय शैलीमा खासै केही परिवर्तन हुन सकेको छैन । कस्तो विडम्बमा ! हरेक पाँच वर्षमा जसले जेजति पैसा थुपार्न सक्छ, शासकीय सत्ता र शक्ति उसैको हातमा पुग्ने गर्छ । नेकपा र कांग्रेस देशको राष्ट्रिय स्रोत र संस्थाहरुलाई कसरी उकास्नेभन्दा पनि तिनीहरुमाथि दोहन गर्दै आआफ्ना आसेपासे र इष्टमित्रहरुका सेवासुविधामा केन्द्रित छन् । संविधानमा सार्वभौमसम्पन्न लेखिदिएपछि जनता स्वतः टुप्पोमा पुग्ने होइनन् । त्यसका निम्ति सो संविधानलाई आधार मानेर विकास गरिएका यावत् संस्थागत ऐन कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम एवं प्रक्रिया केकसरी जनताप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही छन्, त्यो मह¤वपूर्ण हो । जब देशमा हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ठगी एवं राष्ट्रिय स्रोतहरुको खुलेआम लुटको नियमित प्रक्रिया चल्दछ तब शासकहरु जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको ठहर्छ । नेपालमा नेताहरुमात्रै सार्वभौमसम्पन्न छन् । जनताको सर्वोच्चताको झूटो नाम लिएर ४–५ जनाको इच्छा र आकांक्षाहरुलाई तृप्त गरिएको छ ।
आज नेपालमा जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार नागरिक अधिकार संकुचित तुल्याउँदै विगतको निर्दलीयताको कदमअन्तर्गत नियन्त्रित समाज निर्माण गर्नतर्फ लागिपरेको छ । बलियो बहुमत हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारमा विकासका लागि निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिएन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको छ । अहिले सरकारको खातामा १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ निष्क्रिय रहेको बुझिएको छ । त्यसले गर्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या दोहोरिएको छ भने अर्थतन्त्रमा माग घटेको छ । सरकारको खर्चको स्थिति निकै कमजोर छ । भ्रष्टाचारले गर्दा यो दुई वर्षमा राज्यका सबै अंग क्षतविक्षत भएका छन् ।
‘वे ग्रुप’को सरसफाइ
जीवनको वीणा कसरी बजाउने ?
मानव बेचबिखन : अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज र नेपालको कानुनी संरचना